isbedelka cimilada ka dhigan maalmood helayso dheer, saynisyahano heli - Rule News
isbedelka cimilada ka dhigan maalmood helayso dheer, saynisyahano heli
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “isbedelka cimilada ka dhigan maalmood helayso dheer, saynisyahano heli” waxaa qoray Oliver Milman, waayo theguardian.com on Friday 11 December 2015 19.00 UTC
Saamaynta isbedellada cimilada u muuqan kara in ay si aada negative laakiin waxaa bar dhalaalaysa, kuwa halgan si aad u hesho waqti ku filan maalintii: glaciers barafku sababaya wareeg ee Dhulka si loo yareeyo oon ku hagaagay, cimrigeenna aan, cilmi baaris cusub ayaa laga helay.
cilmi Jaamacadda Harvard ayaa jawaab la siiyo xalilo dheer-qabtay in ka badan sida yaraanaya glaciers waxaa saameeya ah rogista iyo dhidibka Dhulka, xisaabinta in muddo Maalin ayaa dheeraado by millisecond ka badan la soo dhaafay 100 sano.
Related: UN on track qaldan qorshe ay ku xaddido kululaaneysa ee caalamka in ay 2C, ayuu yidhi cilmibaadhaha sare
Joojiyaashu waa la more maratay codsatay doonaa inay dhulka wareeg sida glaciers dhalaali heer abid ka dhaqso, taasoo la micno ah in ugu yaraan shan rabtay waxaa lagu dari doonaa maalin kasta in ka badan koorsada ee qarniga 21aad. dhidibka ee Earth aad ka wereegi doonaa, la pole woqooyi qarka u saaran inuu u dhaqaaqo meel by saabsan 1cm (o.4in) inta lagu jiro qarnigii this.
cilmi, daabacay horumarka Science, muuqata xalin xujo cilmi ah oo loo yaqaan "adkaynasaa Munk ee", kaas oo ka yimid 2002 warqad cilmi-by oceanographer Walter Munk, baadhaya sida barafku ee glaciers ayaa beddeli dhulka wareeg iyo dhidibka.
Sida baraf dalka ka ulihiina dhalaashay ay sabab u tahay soo baxna heerkulka atmosfeerta, miisaanka wareegaayo oo biyo ah dunida oo dhan waa in is baddal lagu sababo in dhidibka korkiisa oo dhulka dhigeeysa, iyo fikirka noocaas ah a yar ee wareeg ah. Sidoo kale, miisaanka ku daray oo biyo ah xagga dhulbaraha dhigi doonaa dhulka si ay u yareeyaan, badan oo ay jidka ku skater tiradaasi fur wareegaya hakin lahaa haddii isagu ama iyadu ay hubka ay ka heleen jidhkooda ka fog gaadhay.
Munk, waxana in saameynta ugu dambaysta ee Age Ice ah 5,000 sano ka hor, marka barafka badan ee hore 15,000 sano ayaa ka caawiyay lahaa hakin dhulka wareeg. Laakiin, yaab, wuxuu helay in xitaa la isku celceliska heerka badda baxdo ee sanadka 2mm inta lagu jiro qarnigii 20-, ma jirin isbeddel si wareeg dhulka ama dhidibka ka baxsan in ay keento Age Ice ku dhamaaday.
"Waa joogey signal a shir sanadeedkii weyn iyo waxa uu noqon lahaa deg deg ah sida waxa ay qaadataa oo keliya maalmo ama toddobaadyo biyo in dhalaalay ka ulaha lagu baddalo adduunka oo dhan,"Ayuu yiri Jerry Mitrovice, professor of Geophysics Jaamacadda Harvard iyo hoggaamiye cilmi.
kooxda Mitrovice ayaa dib ugu cilmi Munk ayaa tegey oo codsatay waxgarashada ugu danbeeyay ee sayniska waa in. Oo waxay arkeen in Munk ayaa wax yar ka quudhsan u kaca heerka badda celceliska - waxay ahayd ku dhawaad ​​1mm si 1.5mm sanad kasta in ka badan qarnigii 20aad halkii 2mm.
Waxay sidoo kale codsatay model ah updated si xisaabinta. Munk wareegay Earth uu si degdeg ah beddelo si barafku baraf ka dhacay sida Age Ice ku dhamaatay. fahamka More dhawaan waqti this, Si kastaba ha ahaatee, soo jeedisay in Earth ma ahaa sida spherical sida ay hadda tahay muddo dheer, sida warqadaha baraf weyn keena geliyo ulaha xalleefin iyo dhulbaraha in bararsan baxay.
Marka kooxda ayaa waxana sida baddu ee saameynta kale, waxay heleen in barafku sitoos qarnigii 20aad ayaa dhab ka dhigay dhulka si ay u yareeyaan iyo fikirka noocaas ah. xawaaraha ee wareeg caalamka ee la heerga karaa cabbirka of booska xiddigaha 'ee la xiriirta Earth iyo sidoo kale falagiisuu ee satalayt, kaas oo ay leeyihiin si ay ula qabsadaan yar haddii isbedel wareeg ee dunida.
ariinta Tani ayaa lagu wadaa inuu sii fahmayaan. Celceliska u kaca heerka badda caalamiga ah hadda waa ka badan 3mm, sida ay IPCC u, iyadoo mugga glaciers adduunka ee qarka u saaran inay Adan by dhexeeya 15% iyo 85% by 2100, ku xiran tahay sida ay soo maratay quruumaha yareeyo koriyo gaaska iyo beddeli nabaad mass.
Daraasad dhawaan lagu ogaaday in dib u gurasho hadda ee glaciers dunida ee ahaa "taariikh aan horay loo arag", la saynisyahano ka digay in sitoos weyn ee Greenland in uu haystaa biyo ku filan si ay u kicin heerka badda caalamiga ah by nus mitir ayaa bilaabay in ay u qadimeen galay Atlantic Ocean Waqooyiga. u kaca heerka badda waxaa sidoo kale sii shiday by ballaarinta kaamerada, halkaas oo badda ku koraa sidii ay kor kulaalaa.
"Muddada Maalin hadda waa millisecond ah muddo ka badan qarni ka hor, laakiin in dardar doonaa sida barafku kor,"Ayuu yiri Mitrovice. "Dadka aan la ordaya ka guryahooda qaylo ku saabsan millisecond dheeraad ah laakiin waxa ay ku darayaa xaqiijin weli dheeraad ah ee waxa aynu qabanayno in deegaankeena. Waa faraha kale. "
23846	0 Agence France-Presse, Academic Shokalskiy, Alentejo, American Heart Association, Badda Amundsen, jawiga, Earth, kululaaneysa Global, Japan, nuclear nukliyeerka
← Mark Zuckerberg ku hadla oo lagu taageerayo Muslimiinta ka dib markii toddobaadkii ee 'nacaybka' Sidee dadka ka adkaan doonaa Mars iyo wixii ka dambeeya →